विगत केहि दिनदेखि चर्चामा आएको महामारी “डेङ्गु” जसले जनमानसमा डर र त्रासको श्रृजना गरेको छ । धरानबाट फैलिएको यो महामारी, अहिले मोरङ्गको विराटनगर लगायत पुर्वीक्षेत्रमा पनि यसको संक्रमण देखा परेको छ ।
यतिको महामारी फैलिदाँ पनि के हामी सबैलाई थाहा छ त ?डेङ्गुभनेको के हो र यो कसरी सर्छ? डेङ्गुको विषयमा विराटनगर लगायतका सहरी क्षेत्रमाजनचेतना भएपनि माध्यमिक तह अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा डेङ्गु सम्बन्धि शिक्षाको अभाव रहेको छ । अझ उनिहरुले त डेङ्गुको नाम पनि सुनेका रहेनछन्भन्ने कुरा हिजो मैले थाहा पाए । त्यसैले यो लेखमार्फत जनमानसका जिज्ञासाहरु मेटाउन चाहे ।
डेङ्गु भनेको के हो ? डेङ्गु भनेको लामखुट्टेको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको भाईरल ज्वरो हो । खासगरी फिमेल एनोफेलिज लामखुट्टेको टोकाईबाट संक्रमित भएर डेङ्गु रोग लाग्ने गर्छ । विशेष गरी समुन्द्री सतह भएका देशहरु तिर यो रोगको प्रकोप धेरै देखिने गर्छ ।
डेङ्गु कसरी सर्छ ? जब डेङ्गु संक्रमित लामखुट्टेले एउटा स्वस्थ्य व्यक्तीलाई टोक्छ त्यही टोकेको ठाउँबाट मानिसको शरीरभित्र प्रवेश गर्दछ । त्यसपछि रगतमा पाईने सेतो रक्तकोष (WBC) भित्र प्रवेश गर्छ र मानिसमा विभिन्न खालका लक्षणहरु देखा पर्छन्। डेङ्गुका लक्षणहरु डेङ्गु संक्रमित व्यक्तिहरुलाई विभिन्न लक्षणहरु देखापर्छन्
काफ्ले जनस्वास्थ्य विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।